Home News Askari katirsan Ciidamada Dowladda oo ruux shacab ah ku dilay Gobolka Shabeellaha...
Askari katirsan Ciidamada Dowladda oo ruux shacab ah ku dilay Gobolka Shabeellaha Dhexe
Wararka naga soo gaaraya degmada Mahadaay ee Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi lagu dilay Nin ka mid ahaa dadka ku nool degmadaas.
Ninka la dilay oo lagu Magacaabi jira Cadiraxmaan Cadow Maxamuud ayaa waxaa dilkiisa ka dambeeyay askari ka tirsanaa Ciidamada Dowlada Soomaaliya,sida ay sheegeen ehelada Ninka la dilay.
Khadra Maxamuud Sugawaa oo la dhalatay Xaaska Marxuumka la dilay ayaa sheegtay in xilliga la dilayay uu ka yimid deegaanka Buurane,isla markana auu gaari ku waday Shaqaale doonayay inay uga Shaqeeyaan beer uu ku lahaa degmada Mahadaay.
Koontorool ku yaalla Buundada degmada Mahadaay ayay sheegtay markii uu marayay in askari ka tirsana Ciidamada jooga uu rasaas ku furay,isla markaana uu sidaasi ku geeriyooday.
Dhawaan ayay sheegtay in uu guursaday walaasheed oo lagu Magacaabo Sahro Maxamuud Suguwaa,isla markaana ay isla jireen waxka yar bil,isla markaana ninkii ka dambeeyay dilka gacnata lagu dhigay,lana geeyay Saldhiga degmada Jowhar.
Marxuumka la dilay ayaa ka mid ahaa Beeraleyda degmada Mahadaay,waxaana eheladiisa ay ka dalbadeen dowladda Soomaaliya inay waxka qabato dadkii ka dambeeyay dilkaas,sidoo kalena dhowr mar dad lagu dilay degmada Mahadaay.
Previous articleMadaxweyne Waare oo maanta gaaray Magaalada Beledweyne
Next articleshacab lagu dilay Duleedka Degmada Warsheekh
Aqoonyahan Diinta ku adag oo ku guuleystay Doorashadii ka dhacaday DalkaTunisia